Fanangonan-tsonian’ireo depiote miisa 50: mbola resaka an-jorony ny fanonganana ny governemanta | NewsMada
Fanangonan-tsonian’ireo depiote miisa 50: mbola resaka an-jorony ny fanonganana ny governemanta
Mbola mitoetra ny feo mandeha ny amin’ny sonian’ireo depiote miisa 50 voangona amin’ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta. Nitondra valin-kafatra ny filohan’ny Antenimiera, Razanamahasoa Christine. “Tsy mbola hitako izany ary tsy misy porofo rahateo hatreto. Mety misy tokoa ny fikasana saingy tsy mbola tonga eto ambony latabatro ka amiko, mijanona ho tsaho fotsiny izany”, hoy izy, omaly teny Tsimbazaza. Nanteriny fa mbola misy fetrisa tratrarina izany ary mbola misy dingana arahina.
Etsy andaniny, nitondrany fanazavana koa ny momba ny nandanian’ireo depiote maro anisa ny volavolan-dalàna, tetibola taona 2023. Notsindriny fa miompana kokoa amin’ny sosialim-bahoaka izany. Eo ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Nisaorany manokana koa anefa ny fanjakana amin’ny nahazoan’ny Antenimieram-pirenena ny anjara volany amin’izany. “Kely tokoa izany teo aloha saingy nohenoina izahay rehefa nangataka ka nahazo izany”, hoy ihany izy.
Tsy araka ny tsikeran’ny sasany
Niavaka koa ity tetibola ity amin’ny fijerena ny indostria eto an-toerana, manoloana ny fifaninanana amin’ireo avy any ivelany. Ampy koa ny fotoana nandinihana ny tetibola fa tsy araka ny tsikeran’ireo fiarahamonim-pirenena, araka ny nambarany.